Gaafa Liyyuu Hayliin Soomalee Namakeenya miliyoonotaan buqqaasee kuma dhibbootaan ajjeesu HELOKOFTORIIn Har a ummata Oromoo fixukun eessa ture? – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosGaafa Liyyuu Hayliin Soomalee Namakeenya miliyoonotaan buqqaasee kuma dhibbootaan ajjeesu HELOKOFTORIIn Har a ummata Oromoo fixukun eessa ture?
Durumaanuu jeettiin isaanii Oromoodhuma ittiin rukutuuf bitaniiti keewwatanii qabu turemoo akkami dhiiroo?
Ani umriikootti jeettiin isaanii nama dha an hin argine”kunoo yeroo jalqabaaf saba keenyarratti gaafa harka hiikatanin argaajirra.
Naannoo Amaaratti kan ta’aa jiru kun. Hanga Awwaashitti nideemna jetti jaroonni. Warri keenyi wali waraanti. Oromoon OPDO caala diinna hin qabu. Kan Oromoo xiyyaaran waraanu kana Afaan Oromoo dubbatu OPDO malee eenyun argee agahee hin beeku
Siirbaa Hayu Dure Dawit Ibsa fi
WBO GAACHANA Keenya
Harkaa wal haa qabannuu tokkoo haa taanu har’aa daambi dollotti raayyyan ittisaa biyya qeerroo ari’aa jirtii isiin warra wbof gargarsaa godhuu jettee qeerroo bosonaatti aru’aa jirtii qeerroo DD tokkootu kara keessa Na qunnamee qeero It is Criminals for 28 years with TPLF.
Yaa Hummata keenya: Sareen Foon naeegi jedhani Foon Sareetti hinkennatani. OPDOn kanuma dha. Gara Jabina TPLF hummata Oromo irratti hin-hojjannee OPDOn hojacha jirti? “Beware what you wish for” jedha Faranjiin.
Warri ammaa Motummaa Oromoo jedhee xibaaru maal haajedhu laataa? Mootummaan Oromoo Oromoo Xiyaaraan reebuu Funyaaniin nu-haabahu. Jarattin kuni ergamtuu TIGREE torte, amma immoo ergamtuu NAFXANOYati. Kana beekuu qabna. Oromoon hardha gammachuun Lafa dhiituu yoo jiraate, Raatuu dha. Bara 1970n kessas Lafti kan Qoteebulaati yommuu jedhamu Hundi Lafa dhite. Otoo ture hinbulin dhiigaa bohuu calqabe hummanni dargiif lafa dhiitaa ture sun. Ammas kanumatuu ta’aa jira. History is repeating itself.
Wanti nama dinqu garuu kan Jawaar Mohammeed Motummaa Hummatatu amma jiraa. Mootummaa Hummataa qabso keenyaa ijaarrnnee jiraa jedhe xibaaruu isati. Egaa yoo mootummaa humataa ta’ee Motummaan Abiyyii, humanni si-hinfeenuu jedhanii jira, maalif Xiyaaraan reeba?
Jijjramni QBO kan fide yoo jiraate, murnoota Mootumman EPRDF qallabu kedduminan uumuu dha. Jarreen akka ODF fi kkf, murnota kayyoo hinqabne, murnota dantaa dhuunfaaf bitamani dha. Yommuu biyyatti galan, ‘Non-compete Clause” kan jedhamu warra mallatessani dha. Kayyoo OPDO fudhatanii, fiixaan bayinsa ishif kan carraaqan dha.
Fallii jiru, finciluu qofa dha. Har’aa Obbolaa keenya Dhiha Oromi’atuu xiyyaaraan reebamaa jira. Boru immoo dabareen kan keeya dha. Wallaga jibbuun kun eesaa akka dhufe beektuu laataa?. Gurmuun Habasota, leeliftonni sirna Minilik, QBO kan durese, kan fuula duratti gaggesse asin gahe fi itti cicha jiru Wallagadha jedhanii Amanu. Lammii keenya Wallagaa fi hummata Eritrea akkasumas hummata Tigray ija tokkon laaluu jarri. Ertirea carromte bilisomte jirti. Tigray humnomtee rorro ofirraa ittisa jirti. Garuu kan akka carraa ta’e har’a Hin-humnayin hafe, hummata keenya Wallagga addatti, Hummata Oromia waliigalatti dha. Ilmaan Habashotaa, Abiy Ahimad fi lamman fayyadamanii Haaloo isanii bara dheeraa, kan danda’an hummata keenya Wallaggaa irratti baha jiru. Kana sirritti beekuu qabna. Sirna Dargii caalutu nutti dhufaa adeema.
Oromoota Diaspora, warreen “activist” fi ‘xiinxaltota” siyaasaa ofin jedhan heddu nagaddisisu. Raatuu dha hundi isanitu. itopia kessatti siyasni saynsii miti. Nama sammuu habasa beekutu siyaasa biyyatti hubanoo argachuu danda’a. jarri ‘xiinxaltonni’ garuu mudoo kana qabu. Isanis, turee bulee akkuma Haile Fida ta’u ykn immoo ‘non-compete claus’ akkuma gartuu kaanii mallatessanii biddena furdaa nyaatu.
Oromoo kan siif falmu tookichi yoo jirate, WBO qofa dha. yommuu tokkicha abdii qabdu diinni ykn nyaphnii bitaaf mirgaan itti duulu callifte hin-laalii; Falmadhu! Abdin ati qabdu kana qofa dha.
Akka naaf bektanif: Ani Wallagatti hindhalanne; Oromummaa isanitifan Isan jaaladha akkuma Oromo oromia baratti, kana naaf-hubadha.
Yaa Hummata Oromia dubbii kana yaadattuu:
Gaafa Dubbii himaan Motummaa EPRDF Getachew Reda ture, yommuu inni wanta ta’aa ture Qabsoo Qerroon gaggessaa turre ilaalchise dubbii himuu fi akkaataa inni itti himaature hedduu keenya Aarsaa, Xiiqii kessa nugalcha, daran qabsof nukakaasaa ture. Dubbii Qabbanessuf jecha, mootummaan EPRDF Getachew achi kaaftee bakka isa Dr. Nagarii Leencho bakka buufatte. Wayyaaneen yakka ishii hojjachu irraa of-duubatti hindeebine, garuu kan amma ishiif sobu, Nagarii Leencoo ilma Oromoo ta’e. Oromoon dur Geetachew Reda dhiigaa isaa danfisu, yommuu Dr. Naagarii Leencoo dubbataa ta’e, saalfachu calqabe. Xiiqii namatti dhagahamuu irraa Saalfii namatti dhagahamuti isa kamtu qabsof nama onnachisaa gaaffii jedhuf, deebii isaa isnifin dhiisa. Garuu ‘Xiinxaloni’ siyaasaa akka wanta Oromof bu’a argametti fudhacha turan turaniru.
Ammas akkuma assin olitti xuquu yaale, Abiy Ahmed hailamariam bakka bu’eef lafa dhiituun Oromoof hinmalle. Amma saalfii nutti dhagahamaa jirata ta’a. Otoo Hailamariam ta’ee garuu Xiiqitu nutti dhagahama. Motumman Tigree akka jetee dhagessanii laata dur. Nuti kan haamilee nama cabsinu Angoo irraa nama busu qofaa mitti, yommuu Angoof nama muudnus Hamilee nama cabsu beeknaa jette. Warri Abiy fi Lamman Oromiaf hojjacha jiru jettani yaaddan amma maal jettu! Oromoo yommuu isaan xiyyaaran reeban.